Isemthethweni imiba ye-bankruptcy umgaqo-nkqubo i-Russia - Russian Lamagqwetha luhlomle kuwo - Zonke Russian abaqondisi-mthetho ingaba apha! Oyena isemthethweni portal.
Isemthethweni imiba ye-bankruptcy umgaqo-nkqubo i-Russia - Russian Lamagqwetha luhlomle kuwo
Ezinye zezi zinto ziya kuza kuyo umkhosi ngo
Inkqubo esemthethweni regulation of bankruptcy nemigaqo-nkqubo kwi-Russia ngu ukuphakanyiswa ekuphuculeniUbungqina lento ithoba federal imithetho yamkelwa ngo, apho substantially utshintsho Federal Umthetho oyinombolo yama FZ 'Ngomhla we-insolvency (bankruptcy)' ngokunjalo nezinye imigaqo ukuba ibandakanye bankruptcy regulation. Enye uninzi notable inyaniso kwi-Russian bankruptcy umthetho ingaba kujike ngaphaya uhlobo nemigaqo-nkqubo isetyenziswe kwi-insolvency amatyala. Ezona ezibalulekileyo utshintsho oku ngokubhekiselele ngabo eyenziwe Federal Umthetho oyinombolo yama FZ ebhalwe julayi. Ukususela epreli, kukho wenziwe i-zombane Idityanisiwe Federal Bhalisa ka-Bankruptcy Ulwazi (UFRBI). Xa kuqaliswayo, ulwazi ofakwe kwi - oku Bhalisa ikakhulu abachaphazelekayo imigaqo uphunyezwe kwi-bankruptcy iimeko ngokuchasene abanamatyala, administrators ekubeni wonyulwa yinkundla kunye nempahla zithengiswa ngokusebenzisa bidding iinkqubo. Ukusuka kwi- kweyekhala yowama- onwards, ulwazi ukuba bangenele kwi-UFRBI uza kanjalo ziquka: isixa-mali inkcitho ezithe xa ehambelanayo nkqubo uphunyezwe kwi bankruptcy meko, kuquka ulwazi malunga imali ihlawulwe kwi-umlawuli kwaye imali ehlawulweyo na owenza abantu nge-enjalo umlawuli i-ungqinelwano ikhasi ixabiso debtor ke ipropati findings njengoko nokuba kukho imiqondiso ukuba bankruptcy ngu deliberate okanye sham isixa-mali creditors' amabango kwaye imihla apho creditors' iintlanganiso ziqhutywa scheduled. Ukususela UFRBI yaba yinxalenye Idityanisiwe Federal Bhalisa neenkqubo Zomthetho Amaqumrhu' Eyenziweyo kwi, kuya wenziwe apparent njani, kokukhona lula na amaqela anomdla uya kukwazi ukufikelela ulwazi malunga bankrupt kuthi. Enye ebalulekileyo yophuhliso kwi-Russian bankruptcy umthetho kukuba izibonelelo apho ukulawula i-insolvency ka-ethile iindidi abanamatyala zithe yongezelela Federal Umthetho 'Ngomhla we-insolvency (bankruptcy)'. Kulo nyaka uphelileyo, substantial iinguqu ezenziwayo ngokubhekiselele kule bankruptcy ka-ababhekisi phambili (oko kukuthi abantu attracting imali kunye okanye uphawu ukusuka abo utyale imali kwi-ukwakhiwa), i-non-governmental-pension funds, ezolimo iinkampani kwaye ifama amashishini. I-bankruptcy umthetho kuquka eyahlukileyo icandelo elawula bankruptcy ka-ezikhethekileyo injongo izithuthi kwaye mortgage agents. Kufuneka kuqatshelwe ukuba inkcazelo okhethekileyo injongo isithuthi, oko kukuthi okhethekileyo injongo yemali isithuthi okanye okhethekileyo injongo isithuthi kuba projekthi financing, iza kuphela kubonakala kwi- kweyekhala yowama- xa afanelekileyo zihlomelo kumthetho Federal Umthetho 'Kwi-securities kwimakethi' kuza kuyo ukusebenza. Okhethekileyo injongo yemali isithuthi icacisiwe njengokuba isemthethweni iqumrhu aiming ukuba bathenge impahla amalungelo ibango phantsi credit izivumelwano, imali-mboleko izivumelwano kunye nezinye izibophelelo, bathenge impahla enxulumene olukhawulezileyo lwemali amabango asele acquired, kuquka abo phantsi leasing kwaye yerente izivumelwano, kuze kukhutshwe debentures secured nge sithembiso ka-olukhawulezileyo lwemali amabango.
I-imisebenzi okhethekileyo injongo isithuthi owenza projekthi wezimali injongo ukuba iimali elide (ubuncinane iminyaka emithathu) - mali projekthi.
Loqoqosho imeko kwiindawo zentengiso sele lenyuka inani mali amaziko ukuba ingaba insolvent. Oku lwenze oko kuyimfuneko ukuze itshintshe insolvency mthetho ngokunxulumene olu didi ka-karhulumente. Umzekelo, legislators kuba wanika ilungelo umngeni i-eyenziweyo-mali karhulumente kwi-provisional nolawulo. Oku ihlala isebenza de bankruptcy meko kukuba wamngenisa inkundla. Kwindawo yokuqala, injongo kukuba yenza impahla yexabiso kuba recovered ngakumbi ngoko nangoko emva kokuba zithe unlawfully warhoxa i-bank, kunye nokuqinisekisa ukuba creditors' iimfuno kuyahlangatyezwana nazo. Ukuba iibhanki ogunyazisiweyo ukutsala efakwa ebhankini ukusuka abantu baba insolvent, oku idla wenza ebalulekileyo yoluntu resentment. Ukuphucula baqinisekisa ukuba elona lincinane ezikhuselweyo abantu ababekho ezichaphazelekayo yi-iibhanki wokuba insolvent, Federal Umthetho 'Kwi insuring abantu' efakwa ebhankini kunye iibhanki ye-isirashiya' sele ngoku ayifakwanga efakwa ebhankini eyenziwe umntu entrepreneurs ekuhambeni zabo ishishini imisebenzi kuluhlu ka-efakwa ebhankini ukuba awunayo ukuba abe insured ngokuchasene iibhanki wokuba insolvent.
Ukongeza, ukususela Urhulumente Corporation 'Faka i-Inshorensi-Arhente' wenziwe vested kunye imisebenzi a umamkeli ngokunxulumene ibhanki ukukhulisa abantu' efakwa ebhankini, ngaphezu Federal Umthetho waba igqityiwe kunye entsha imigaqo aiming ukomeleza ubume nokuqinisekisa ukuba ezongezelelweyo imisebenzi ye-Arhente zizalisekisiwe.
Ezi ziquka yayo kukawonke-wonke kwi-insolvency iingxoxo ka-non-governmental-pension funds. Bephethe abantu abo ulawulo a debtor, netyala kuba abanjalo debtor ke, izibophelelo, ebalulekileyo instrument kuba kuhlaziywa i-creditors' infringed amalungelo. Kwiminyaka yakutsha nje, isemthethweni umqathango wama-eli ziko ngokunjalo komthetho senzo kuba bafudukela kulo kolawulo apho ke ngakumbi emidlalo ngomhla apho umntu unako kubanjwa netyala ukuba izenzo zabo okanye omissions lwaba neziphumo ngendlela debtor ke bankruptcy, kwaye ngaphezulu iindlela ukufezekisa oku. Ngo, Federal Umthetho 'Ngomhla we-insolvency (bankruptcy)' waba ya ukuba angenise a kwemida xesha kuba isicelo kuba ezenziwe sesi sibini kuba umntu ezakubanjwa netyala kwi ezithile emidlalo. Ukongezelela, ezinye inkcukacha waba echazwe njani abantu uphando non-governmental-pension funds lunokwenziwa netyala. Ingentla kukho inyaniso kwaye utshintsho kwi-Russian bankruptcy umthetho apho kubonakala ukuba abe ezininzi ezibalulekileyo. Baya incopho ngakulo a elokugqibela ukuba umthetho kukuba siqhubeke evolve, kwaye ingabi ngaphezu imisikeko kuba creditors.
ukuqeshwa ileta - Russian abaqondisi-mthetho
D'Investissement À Des Déductions D'Impôt